I-Chalet "FEINIS" eVierkanthof - encinci kodwa intle!
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMarkus
NdinguMarkus kwaye ndihlala nomfazi wam kwintendelezo entle yesikwere ukusukela ngenkulungwane ye-16. kunye namadlelo angama-4,000m² kunye nehlathi. Singathanda ukukunika ithuba lokuchitha iholide emnandi apha kunye nosapho kunye / okanye nabahlobo.
Intendelezo yahlaziywa ngokupheleleyo emva kweminyaka eliqela yokulungiswa okubanzi.
Iiyunithi zokuhlala ezine zenziwe. Sihlala kwiphiko lempuma, kukho enye indawo esemazantsi kunye ne-2 chalets kumazantsi-ntshona.
I-chalet ye-"FEINIS" ifumaneka kumazantsi-ntshona kwaye, kunye ne-35m², ilungele abahambi abangatshatanga okanye abantu aba-2 - abancinci kodwa bahle kwaye baxhotyiswe kakuhle.
Ubume begumbi: Ucango lokungena olwahlukileyo lukhokelela kwigumbi lokuhlala elibanzi nelipholileyo-lokulala elinekhitshi elidityanisiweyo elixhotyiswe ngokupheleleyo. Igumbi lokuhlambela elikhulu linika indawo eninzi kwaye indlu yangasese iyafikeleleka ngokwahlukeneyo.
Ukufikelela kwi-chalet kunye namagumbi amathathu anokufikelela kwinqanaba eliphantsi kwaye ke ngoko akukho zithintelo ngokupheleleyo. Ukuba kuyafuneka, sinokubonelela ngebhedi.
I-chalet ye-"FEINIS" inendawo yayo yabucala yangaphandle enezihlalo ezitofotofo ekungeneni kwayo. Indawo ebiyelwe ngokupheleleyo engama-4,000m² ingasetyenziselwa abahlobo bakho abanemilenze emine. Siyavuya ukukunika isitya somlilo, igrill okanye iibhayisekile :)
I-Vierkanthof yethu yahlukile ngokumangalisayo - ngaphandle, ekupheleni kwendlela yabucala, unoxolo kunye nokuzola kunye nombono omangalisayo wamabala ajikelezileyo.
Kodwa kwakhona macala onke kukho amathuba alishumi kunye neenketho zokuphumla kwaye usebenze:
E-Böheimkirchen (iikhilomitha ezi-6 kude) kukho iivenkile ezinkulu iBilla, i-Spar, iHofer, ivenkile yamachiza iBipa kunye nevenkile yasefama kunye nevenkile yenyama.
Ukongeza, ezinye iivenkile zokutyela ezithandwayo kunye neendwendwe kwiilali ezingqongileyo zimema ukuba uyeke ikhefu.
Uluntu lwaseKirchstetten ngokwalo lwaziwa ngokuba “luluntu lweembongi” kwaye ubugcisa nenkcubeko zisekhaya apha. Kodwa unokuzibandakanya nokhenketho oluthambileyo apha.
Uyakwazi ukubona, ukuva kwaye ukonwabele ubugcisa, inkcubeko kunye nembali apha, ukusuka kwiqela elikhulu lomculo wesintu ukuya ekufundeni iwayini, ukusuka kwi-KKK Atelier Mayerhofer ukuya kwimyuziyam ye "Alte Dorfschmiede", ukusuka kwisikhumbuzo sokuphakamisa iwayini kunye ne-Audenhaus ukuya kwinqaba evuthayo yaseTotzenbach. .
I-Kirchstetten ineqela leendlela ezintle, ezifikeleleka ngokulula zokunyuka intaba. I-supraregional "Wienerwaldradweg" iwela indawo yethu kwaye idityaniswe nobugcisa okanye ulonwabo lwenkcubeko, uhambo olumnandi losuku lonke lunokuba namava. Iicawe ezimbini ezintle, ezindala zinokuxela malunga neminyaka eyi-1,000 eneziganeko okanye ungavumela ingqondo yakho ibhadule kulo mhlaba uzolileyo ngelixa uthatha uhambo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Waasen